Joogsi bas cusub ayaa laga furay dhinaca Seattle waterfront, oo u adeegaya koonfur-galbeed Seattle iyo xaafadaha degmada King - Seattle Traffic
Joogsi bas cusub ayaa laga furay dhinaca Seattle waterfront, oo u adeegaya koonfur-galbeed Seattle iyo xaafadaha degmada King
Toddobaadkii hore (February 19-20), dagmada king ee Metro waxay furtay laba boosteejo bas oo cusub, mid waqooyi u socda iyo mid koonfur u socda, Alaskan Way S oo u dhow S Jackson St.
Joogsiyadani waxay u adeegaan wadooyinka baska 55, 56, 57, 113, 120, 121, 125, iyo RapidRide C Line. Mid kasta oo ka mid ah meelahan basku maro waxay u adeegaan xaafadaha Galbeedka Seattle iyo bulshooyinka Dooxada Duwamish ee u dhow. Hoyga baska cusub ayaa lagu dari doonaa joogsiga baska cusub xagaagan.
Guji si aad u ballaariso sawirka isticmal (new windhow)
Dhismaha Barnaamijka Waterfront Seattle waxa uu ka qayb qaatay dhisidda kaabayaasha shubka iyo korantada ee looga baahan yahay joogsiyadaha baska cusub iyo jidadka gaadiidka ee Alaskan Way S, inta u dhaxaysa waddooyinka S King iyo Columbia.
Bishii Noofambar 2021, dhismaha mashruuca Waterfront Seattle waxa uu gaaray guul aad u xiiso badan -ay ku jirto furitaanka wadooyin cusub oo koonfurta u socda dhinaca galbeed ee Waddada Alaskan, iyo jidka tareenka ee koonfurta. Dhawaan, horraantii bishan (February 2022), Waterfront Seattle waxay dhammaysay calaamadaynta cusub ee wadada ku taal dhinaca bari ee Waddada Alaskan, taasoo u oggolaanaysa degmada King ee Metro basaska inay bilaabaan isticmaalka jidka cusub ee gaadiidka waqooyi.
Hagaajinta isku xirka gaadiidka ee dhinaca waterfront ayaa ah oo mid ka mid ah mudnaanta ugu weyn ee Barnaamijka Waterfront Seattle. Dhismaha dib-u-dhiska Waddada Alaskanku wuxuu ka bilaabmay Columbia St 2019 si loogu oggolaado marinka gaadiidka cusub ee laba-jidka ah inuu furmo goor hore inta uu dhismuhu socdo, isagoo baska ku xiraya wadadaas iyo 3rd Ave. Horumarinta Columbia St wuxuu furmay ku dhawaad laba sano ka hor, Febraayo 22, 2020.
Joogsiyada cusub ee baska ee Waddada Alaskan waa hagaajinta basaska ee ugu dambeeyay ee ay suurto gelisay iskaashiga socda ee u dhexeeya Barnaamijka Waterfront Seattle iyo dagmada King ee Metro saddexdii sano ee la soo dhaafay ee dhismaha. Joogsiyadan cusub ee baska waxay wanaajin doonaan isu socodka koonfur-galbeed ee degmada King iyo magaalada hoose ee Seattle waxayna sahli doonta safarka maalinlaha ah, dhacdooyinka isboortiga ee waaweyn, iyo wixii la mid ah.
Si aad wax badan uga barato:
Akhri maqaalka asalka ah ee bogga SDOT.
Iimayl u dir ama wac kooxda Waterfront Seattle: info@waterfrontseattle.org ama (206) 499-8040.
Booqo websaydka barnaamijka Waterfront Seattle: waterfrontseattle.org.